दृष्टिकोण Archives ~ Page 11 of 19 ~ Banking Khabar
‘अब हिँडेर हुँदैन, कुद्नुपर्छ’ : बजेटका लक्ष्य भेट्टाउन कृष्णहरी बाँस्कोटाका पाँच टिप्स
अर्ली बजेटका रूपमा गत २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको चालू आव ०७३/७४ को बजेटको खर्चले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च करिब साढे ३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ …
सेयर बजारमा किन लगानी गर्ने ? ब्रोकर संघका सदस्य रामचन्द्र भट्टराईको विश्लेषण
सेयरमा लगानी गर्नु भनेको त्यसको तत्कालै प्रतिफल लिनको लागि होइन । त्यसबाट फाइदा लिनको लागि निश्चित समय लाग्छ । अहिलेकै स्थितिलाई हेर्ने हो भने सेयर बजारकोे भविष्य उज्जवल छ । त्यस्तै सेयरमा लगानी गरेर भविष्यमा राम्रो प्रतिफल लिएका उदाहरणहरु पनि …
‘वित्त कम्पनीहरुको बजार साँघुरिएको छैन’
सरोजकाजी तुलाधर – अहिले वित्त कम्पनीहरुको अवस्था राम्रो छ । पुँजी बढिरहेको छ । पछिल्लो समय संख्यात्मक रुपमा फाइनान्स कम्पनीहरु घट्दो क्रममा छन् । तर उनीहरुको वित्तीय अवस्था भने गुणात्मक देखिन्छ । केही दिनयता नै कतिपय वित्त कम्पनीहरुले मर्जर सकेर …
आर्थिक कूटनीतिबाट यसरी सम्भव छ ‘समृद्धि’
सुरेश प्राञ्जली – आन्तरिक विकासको लागि कुनै न कुनै रूपमा बाह्य साथ चाहिने निक्र्योल गरेर तत्कालीन राजा राजेन्द्रले ‘जैसी कोठा’ स्थापना गरी विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको पहल थालेका थिए, जसले तिब्बत र चीन हेर्ने गर्दथ्यो । भीमसेन थापा र रणबहादुर शाहले भारत …
लघुवित्त कार्यक्रमले देखाएका सुनौला अवसरहरु
शिव अधिकारी – लघुवित्त कार्यक्रमले खास गरी घरबारविहिन, आवाज विहिन, छनौट विहिनजस्ता व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ त्यस्ता व्यक्तिहरु माझ सामूहिक भावनाको महशुस गराई आपसमा समूह निर्माण गरी बचत गर्न उत्प्रेरणा जगाउँदै संकलित बचतमा संस्थाको आफ्नो श्रोतबाट वा बाह्य निकायबाट ऋण …
सेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस् रविन्द्र भट्टराईका महत्वपूर्ण टिप्सहरु
तलमाथि हुने शेयर बजारको प्रकृति नै हो । केही समयअघिसम्म निरन्तर बढेको बजार हाल आएर केही करेक्सन् भएको अवस्थामा छ । अहिले धेरै कम्पनीहरुले नाफा घोषणा गरेर कतिपय कम्पनीको बुक क्लोज भईसकेको छ । जसका कारण बजारमा शिथिलता आएको छ …
सेयर बजारका सात समस्या र समाधानहरु
रुप नारायण खतिवडा – सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि कुनै पनि कम्पनीको ‘आईपीओ’ अर्थात् प्राथमिक सेयर लगानीका क्षेत्रमध्ये पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । प्राथमिक निष्कासनमार्फत प्राप्त हुने सेयरको मूल्य निकै न्यून हुन्छ र जोखिम कम हुन्छ । त्यसैले प्राथमिक सेयर खुलेसँगै …
‘बैंकिङ क्षेत्रले जोगाउन सक्छ आर्थिक मन्दीबाट नेपाललाई’
बद्री खतिवडा – आर्थिक मन्दी व्यापार चक्रको एक डरलाग्दो अवस्था हो । मन्दीमा मुलतः कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) आम्दानी, रोजगारी, उत्पादन र बिक्री सबै घट्न जान्छ । मन्दी कुल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धिदर घट्नु अगावै पनि सुरु हुन सक्छ । मन्दीको चक्र …
‘विपन्न वर्गमाथि बैंकहरुले २ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ’
शिवराज श्रेष्ठ – यस वर्ष मौद्रिक नीतिमा भएका प्रावधानहरु लागू हुने क्रममा रहेका छन् । सर्वप्रथम व्याजदर करिडोर लागू भैसकेको छ । यसले वित्तीय बजारमा प्रभाव देखाइसकेकोले अल्पकालिन व्याजदरमा सुधार भएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा, अनिवार्य नगद अनुपात, मार्जिन कर्जा, …